Fantaro i Mulihay Talus, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 1 ka hatramin’ny 7 Oktobra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2019 5:04 GMT
Saripikan'i Mulihay Talus
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Mulihay Talus (@Kau_Jasmine1126) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
我是撒奇萊雅族的茉莉海．達路斯，來自花蓮。一歲時母親過世，由阿美族的外婆撫養長大，所以我的母語是阿美語。1990 年，父親開始參與撒奇萊雅族的正名運動，也讓我開始思索：我到底是誰？但父親在正名運動中因積勞成疾，已於 2006 年離開人世。為了繼承他的遺願，我也一直積極參與撒奇萊雅語言及文化的推廣。
Izaho no Mulihay Talus ao Sakizaya avy any Hualien. Notezain'ny renibeniko Amis aho taorian'ny nahafatesan'i reniko ary lasa fitenindrazako ny Amis. Tamin'ny taona 1990, nandray anjara tamin'ny hetsiky ny sata fankatoavana / famerenam-panamarinana tao Sakizaya ny raiko izay nahatonga ahy hanontany tena hoe “Iza aho?” Maty tamin'ny taona 2006 ny raiko rehefa nararin'ny aretina noho ny fanoloran-tenany sy ny asa mafy nataony tamin'ilay hetsika. Nandray anjara tamin'ny fampiroboroboana ny fiteninay sy ny kolontsainay ihany koa aho nanomboka tamin'izay mba hanohizana ny lova navelany.
10 taona mahery lasa izay, tamin'ny 17 Janoary 2007, nekena ho vondron'ny indizeny faha 13 ao Taiwan ny Sakizaya. Tsy nisy fotoana nahafahako nampiasa an'io fiteny io tamin'ny tontoloko isan'andro na dia nanohy ny faniriako hahay ilay fiteny aza aho. Noho izany, nandritra ny fotoam-pianarana naharitra adiny telo ihany no nahafahako nampiasaiko ny fiteniko rehefa naniry ny hanatsara ny fahaizako izany hatrany aho.
Niparitaka tany amin'ny vondrom-piarahamonina mpifanolo-bodirindrina amin'ny Amis ny vahoaka Sakizaya hatramin'ny Adin'i Takubuwan. Tsy fantatra intsony ny mari-panondroana Sakizaya nanomboka tamin'izay nandritra ny 120 taona, mandra-pahatongan'ny taona 2007. Na izany aza, mbola tsy nanankery ny fanavaozana indray ny fiteniny sy ny kolontsain'ny foko. Faly tokoa aho noho ny fahafahako mandray anjara ho lasa iray amin'ireo hitantana ny kaonty ary manantena ny hampahafantatra momba ny fety fankalazana, ny fomba fitafy, ny vakodrazana ary ny indostriam-poko Sakizaya ho an'ny mpihaino manerantany.
Miasa amin'ny fampitam-baovao aho ary mifandraika amin'ny fampitam-baovao ho an'ny daholobe momba ny kolontsain'ny tompotany sy ny fiteniny ny asako. Fantatro rehefa nifandray tamiko ny mpiara-miasa amiko teo aloha fa mila manararaotra izany hirika izany aho hizarako ny fiteniko, ny kolontsaiko mba ho fantatry ny olona maro hafa. Ho faty ny vondrom-poko iray raha tsy manana ny fiteniny manokana! Mora ho an'ny rehetra ankehitriny ny mandalina araka izay iriany ireo fiteny ireo rehefa nanangona loharano an-tserasera maromaro mba ho an'ny vahoaka ny Filankevitry ny Vahoaka Indizeny ao Taiwan. Mizatra mampiasa ny fiteny Sakizaya aho miaraka amin'ny fianakaviako ankoatra ny fotoam-pianarana ny faran'ny herinandro ary manantena ny hamorona tontolo hampiasana hitenenana ilay fiteny ihany koa amin'ny fiainana andavanandro ary hampita izany amin'ny taranaka afara mandimby.